उबुन्टुको साथ पहिलो चरणहरू। म कहाँबाट सुरू गर्ने? | Ubunlog
उबुन्टुको साथ पहिलो चरणहरू। म कहाँबाट सुरू गर्ने?
पाब्लो अपारीसियो | | Ubuntu
हामी उबन्टु स्थापना गर्छौं, हामी पहिलो को लागी प्रणाली सुरु गर्दछौं अब के गर्ने? लिनक्स-आधारित अपरेटिंग सिस्टमसँग धेरै प्याकेजहरू छन् जसले हामीलाई सम्भावनाहरूको सम्पूर्ण विश्व प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, सायद त्यहाँ छन् Ubuntu हामीलाई चाहिदैन। त्यसोभए हामी कहाँबाट सुरु गर्ने? युबुनलोगमा हामी तपाईलाई यसका लागि व्याख्या गर्दछौं, विशेष गरी ती प्रयोगकर्ताहरूलाई जसले कहिले पनि क्यानोनिकल टोलीले विकास गरेको अपरेटि system प्रणालीलाई छोएनन्।
1 प्रणाली अपग्रेड गर्नुहोस्
2 अनुप्रयोगहरू स्थापना / हटाउनुहोस्
2.1 जाभा र फ्ल्यास (?)
3 कोडेक्स र ड्राइभरहरू स्थापना गर्नुहोस्
4 सुरक्षा र गोपनीयता विकल्पहरू कन्फिगर गर्नुहोस्
5 इन्टरफेस अनुकूलन गर्नुहोस्
5.1 अन्य ग्राफिकल वातावरण स्थापना गर्नुहोस्
6 तपाईंको खाता अनलाइन थप्नुहोस्
7 तपाईंको प्रस्तावहरू?
जब हामी प्रणाली स्थापना गर्छौं, त्यहाँ धेरै सम्भावना हुन्छ पेन्डि updates अपडेटहरू। धेरै अवसरहरूमा, सफ्टवेयर अपडेट अनुप्रयोग स्वचालित रूपमा खुल्छ, हामीलाई सूचित गरेर नयाँ स्थापना भएको नयाँ सफ्टवेयर छ। यदि यो स्वचालित रूपमा खुल्दैन भने, हामीले गर्नुपर्ने भनेको विन्डोज कुञ्जी थिच्नु पर्छ (वा लन्चरमा उबुन्टु आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्) र "अपडेट" शब्द टाइप गर्न सुरु गर्नुपर्दछ।
अघिल्लो स्क्रिनशटमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, अनुप्रयोग आइकन दुई सेमीकारिकुलर एर्रो बाहिरको कालो पृष्ठभूमिमा "A" सँग एक सर्कल हो। यदि त्यहाँ अपडेटहरू छन् भने हामीले केवल "स्थापना" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि हाम्रो प्रयोगकर्ताको पासवर्ड राख्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्।
अनुप्रयोगहरू स्थापना / हटाउनुहोस्
अब हामीसँग अपडेट गरिएको प्रणाली छ, हामीले स्थापना गर्नुपर्नेछ अनुप्रयोगहरू जुन हामीले आवश्यक ठान्दछौं। यो सत्य हो कि उबन्टुसँग धेरै उपयोगी अनुप्रयोगहरू स्थापना गरिएका छन्, तर त्यहाँ हामी केहि थप्न सक्छौं। उदाहरण को लागी, म मेरो सबै उपकरणहरुमा VLC प्लेयर प्रयोग गर्छु र भविष्यमा डाउनलोड गर्न सक्ने कुनै पनि भिडियो प्ले गर्न यसलाई स्थापना गर्दछु। अर्को अनुप्रयोग जुन चाखलाग्दो हुन सक्दछ स्काईप हो, कम्प्युटरहरूमा धेरै प्रयोग हुने मेसेजिंग अनुप्रयोग मध्ये एक हो। मलाई मनपर्ने केहि चीजहरू किनभने मैले पहिलो चोटि स्थापना गरें पछि उबन्टु सिन्याप्टिक प्याकेज प्रबन्धक हो, जुन सफ्टवेयर सेन्टरसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर यसले अधिक जानकारी देखाउँदछ।
मैले गरेको एक सिफारिश हो धेरै पागल नगर्नुहोस्। लिनक्स अपरेटिंग प्रणाली अत्यधिक कन्फिगर योग्य छ, तर के फाइदा पनि समस्या हुन सक्छ। समस्या आउन सक्छ यदि हामीले धेरै प्याकेजहरू स्थापना गर्यौं जुन हामीले प्रयोग गर्दैनौं र हामीले प्रणाली राम्रोसँग सफा गरेनौं एक पटक हामीले मुख्य अनुप्रयोग अनइन्स्टल गर्यौं जसले अर्को विन्दुमा ल्याउँदछ: हामी प्रयोग नगर्दैका अनुप्रयोगहरू स्थापना रद्द गर्दै।
हामीले प्रयोग नगर्ने अनुप्रयोगहरूको स्थापना रद्द गर्न, सफ्टवेयर सेन्टर खोल्नुहोस् र स्थापना गरिएकोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ हामी ती सबै अनुप्रयोगहरू देख्नेछौं जुन हामीले स्थापना भएका कोटिहरूद्वारा विभाजित गरिएको छ, जसले हामीलाई स्थापना रद्द गर्न चाहेको कुरा भेट्टाउन हामीलाई सजिलो बनाउँदछ। हामीले भर्खर के हटाउन चाहान्छौं क्लिक गर्नुपर्नेछ र, दायाँ तिर विस्थापित क्लिक गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, ब्रासेरो डिस्क बर्नर। म किन रेकर्डर नभएको कम्प्युटरमा डिस्क रेकर्डर चाहन्छु?
यसले जिम्प छवि सम्पादन कार्यक्रम स्थापना गर्दछ।
एकता डेस्कटप कन्फिगर र परिमार्जन गर्न यसले एकता ट्वीक प्रणालीमा स्थापना गर्दछ।
यसले एक क्यालेन्डर स्थापना गर्दछ जुन हाम्रो क्यालेन्डरहरूसँग आई क्यालेन्डरको रूपमा समिकरण हुन्छ।
माथिको मौसमले हामीलाई मौसमको अवस्था देखाउँदछ।
जाभा र फ्ल्यास (?)
यद्यपि एचटीएमएल more झन् झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ र एडोबले यसको फ्ल्यास प्लेयरलाई अन्तिम प्रहार दिएको छ, यो अझै सम्भव छ कि तपाईले फ्ल्यास र जाभा स्थापना गर्न आवश्यक छ, उदाहरणका लागि, वेब पृष्ठ। जाभा install स्थापना गर्न हामी एक टर्मिनल खोल्छौं र निम्न लेख्दछौं:
फ्ल्यास स्थापना गर्न ब्राउजर मा निर्भर गर्दछ। फायरफक्सका लागि हामीले के गर्नुपर्दछ:
हामी सफ्टवेयर र अपडेटहरू खोल्छौं।
हामी बाकसमा चिन्ह लगाउँछौं जुन अन्तमा "मल्टिभर्से" भन्छ।
त्यसो भए हामी टर्मिनल खोल्छौं र लेख्छौं sudo apt-get स्थापित फ्ल्यासप्लगइन-स्थापनाकर्ता
यदि तपाइँ फ्ल्यास स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि लिनक्समा पत्ता लगाएका प्राय जसो सुरक्षा त्रुटिहरू यस प्रकारका प्लगइनहरूको गल्ती हुन्। म यसको स्थापना सिफारिस गर्दैन।
कोडेक्स र ड्राइभरहरू स्थापना गर्नुहोस्
यदि हामी इन्टरनेटमा जडित छौं भने उबन्टुले हामीलाई चाहिएको डाउन्लोड गर्नेछ। तर निस्सन्देह, मैले भनें, यदि हामी इन्टरनेटमा जडित छौं भने। उदाहरण को लागी, यदि हामी एक भिडियो खेल्न जाँदैछौं जुन हामीले स्थापना नगरेको कोडेक प्रयोग गर्दछ, उबुन्टुले हामीलाई सोध्नेछ कि हामी चाहन्छौं भने कोडेक डाउनलोड गर्नुहोस् भिडियो प्ले गर्न सक्षम हुन, तर के हुन्छ यदि हामी जडान छैनौं भने? यही कारण हो कि हामीलाई आवश्यक पर्नुभन्दा पहिले यी कोडेक्स र ड्राइभरहरू स्थापना गर्न सल्लाह दिइन्छ।
यी ड्राइभरहरू स्थापना गर्न तपाईंले खोजी गर्नुपर्नेछ (विन्डोज बटन र खोजी कार्य) थप ड्राइभरहरू। यो विन्डोमा हामी विकल्पहरूको सूची देख्दछौं र यस्तो सम्भावना पनि हुन्छ कि हामीले जेनेरिक ड्राइभर प्रयोग गरिरह्यौं जसले गर्दा सबै कुरा हाम्रो पीसीमा सही ढ correctly्गले काम गर्दछ। हामीले के गर्नु पर्छ हाम्रो कम्प्युटरको लागि निर्दिष्ट ड्राइभर छनौट गर्नु।
कोडेक्स स्थापना गर्न, हामी केवल उबन्टु सफ्टवेयर केन्द्र खोल्नु पर्छ, प्याकेजको लागि हेर्नुहोस् उबुन्टुले अतिरिक्त प्रतिबन्धित गर्‍यो र यसलाई स्थापित गरौं।
सुरक्षा र गोपनीयता विकल्पहरू कन्फिगर गर्नुहोस्
यस प्रकारको कन्फिगरेसन पछि महत्वपूर्ण भयो जासूस घोटाला NSA को। त्यस पछि प्रयोगकर्ताहरूले महसुस गरे कि हामीले हाम्रो सूचनाहरूको सुरक्षाको लागि अधिक गर्न सक्दछौं र, जबकि उबुन्टु एकदम सुरक्षित प्रणाली हो, हामी जहिले पनि केही विकल्पहरू कन्फिगर गर्न सक्दछौं हाम्रो इन्टरनेट प्रयोगको बारेमा बढी वा कम जानकारी प्रस्ताव गर्न। हाम्रो सुरक्षा र गोपनीयता विकल्पहरू कन्फिगर गर्न हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
हामी विन्डोज बटन थिचेर खोजी सम्पादन गर्छौं। हामीले सुरक्षा र गोपनीयता खोज्नु पर्छ।
हामी फाईलहरू र अनुप्रयोगहरूमा क्लिक गर्दछौं।
हामी के साझेदारी गर्न चाहँदैनौं भन्ने बक्सहरू अनचेक गर्दछौं।
एक व्यक्तिगत सिफारिश जुन मलाई थाहा छ धेरै प्रयोगकर्ताहरूले अनुसरण गर्दैनन् भन्ने हो कि तपाईं पूर्वनिर्धारित रूपमा डक डकगो खोजी ईन्जिन कन्फिगर गर्नुभयो। यस बिन्दुमा वर्णन गरिएको कुरासँग यसमा धेरै सम्बन्ध छैन, तर यसले हाम्रो खोजहरूलाई ट्र्याक गर्न वा बचत नगर्ने नीतिले हामीलाई अधिक गोपनीयता प्रदान गर्दछ।
इन्टरफेस अनुकूलन गर्नुहोस्
हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको इन्टरफेस कन्फिगर गर्नुहोस् जुन हामी कम्प्युटर प्रयोग गर्दा आरामदायक हुन्छौं। मैले गर्ने पहिलो चीज भनेको सुरुवातकर्ताबाट ती आईकनहरू हटाउने जुन मैले कहिल्यै प्रयोग गर्ने छैन। मैले सुरुवातकर्ताको व्यवहार पनि परिवर्तन गरें। यो गर्नका लागि, हामी प्राथमिकता / रूप / व्यवहारमा जान्छौं।
मेरो कन्फिगरेसन एक तपाईंसँग पछिल्लो स्क्रिनशटमा छ:
सक्रिय कार्य क्षेत्रहरू।
न्यूनतम गर्न संवेदनशीलता।
मेनू पट्टीमा विन्डो मेनूहरू देखाउनुहोस्।
स्वत: सुरुवातकर्ता लुकाउनुहोस्।
हामी पनि जान सक्छौं र लन्चरको आकार परिवर्तन गर्न सक्दछौं, अन्य चीजहरूको साथमा जुन म छोड्न सक्छु तिनीहरू पूर्वनिर्धारित रूपमा आउँछन्।
अन्य ग्राफिकल वातावरण स्थापना गर्नुहोस्
यदि हामीलाई एकता मनपर्दैन भने, हामी पनि गर्न सक्छौं अन्य ग्राफिकल वातावरण स्थापना गर्नुहोस्। मैले यो स्वीकार गर्नु पर्छ कि मलाई यो अधिक र अधिक मनपर्दछ, तर मेरो कम्प्युटरमा यो अलि भारी भयो। मैले MATE वातावरण स्थापना गरेको छु, जुन Ubuntu द्वारा संस्करण ११.१० सम्म प्रयोग गरिएको पुरानो GNoom हो।
एक ग्राफिकल वातावरण स्थापना धेरै सरल छ। हामीले भर्खर हामी कुन कुन चाहान्छौं जान्न र यसलाई टर्मिनल, सफ्टवेयर सेन्टर वा सिन्याप्टिक मार्फत स्थापना गर्न सक्छौं। म्याट वातावरण स्थापना गर्न हामीले निम्न लेख्नुपर्दछ:
दालचीनी वातावरण (लिनक्स टकसाल) स्थापना गर्न हामी निम्न लेख्नेछौं:
र जिनोमका लागि, निम्न:
म कहिलेकाँही MATE ग्राफिकल वातावरण प्रयोग गर्दछु र यस्तो देखिन्छ कि तपाईं निम्न स्क्रिनशटमा देख्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको खाता अनलाइन थप्नुहोस्
हामी सबैको बिभिन्न इन्टरनेट सेवाहरूको लागि बिभिन्न खाताहरू छन् र उबुन्टुमा हामीसँग तिनीहरूलाई थप्नको लागि विकल्प छ। यो विकल्प उबुन्टु आइकनबाट अनलाइन खाताहरू खोजी गरेर वा विन्डोज कुञ्जी थिचेर फेला पार्न सकिन्छ। तलको चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुने छ, हामी हाम्रो फेसबुक, गुगल, फ्लिकर, ज्याबर, याहू, सलाट र एआईएम खाताहरू कन्फिगर गर्न सक्छौं। ट्विटर हराइरहेको छ।
मलाई लाग्छ हामीसँग अहिले सबै कन्फिगर गरिएको छ, तर उबुन्टुले धेरै धेरै विकल्पहरू र संशोधनहरू थप्न सक्छ। जे होस् मँ धेरै छुने प्रणालीको पक्षमा छैन, तपाईले सफ्टवेयर सेन्टरमा कुनै पनि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई केहि रमाईलो लाग्यो कि फेला पार्नको लागि। त्यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरूका साथ पनि सेक्शन छ, त्यहाँ केहि खेलहरू छन्। तिमि के सुझाव दिन्छाै?
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » उबुन्टुको साथ पहिलो चरणहरू। म कहाँबाट सुरू गर्ने?
स्यान्टियागो सान्ती भन्यो
सुरुको लागि 🙂
स्यान्टियागो सान्तीलाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन जोस क्याब्रल भन्यो
पाठकको बटन थिच्दै, hehe
जुआन जोसे क्याब्रललाई जवाफ दिनुहोस्
जोआक्विन भेले टोरेस प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
जोआक्विन भेले टोरेसलाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ किन ट्विटर 'अनलाइन खाताहरू' मा छैन? अभिवादन 🙂
हेल्थंकलाई जवाफ दिनुहोस्
हाम्रो उबन्टु पीसीमा सुपरटक्स कसरी स्थापना गर्ने र खेल्ने
उबुन्टुमा डकी कसरी स्थापना गर्ने